Hemmed Non kpara Tote Bag Factory | China Hemmed Non kpara Tote Bag Manufacturers, Suppliers
Hot New Products China Sublimation oghere Non-kpara Shopping Bag
Omenala logo Printing eyi laminated Shopping Non kpara akpa
Akpa a na-akwaghị akwa bụ otu n'ime akpa ahịa azụmaahịa kachasị ewu ewu gburugburu ụwa. Ọ bụ ọnụ ala dị ọnụ ala, bara uru ma dị mma iji kwalite akara gị. Nhọrọ dịgasị iche iche maka ọdịdị dị iche iche, agba, s, na ịke.
Mere nke na-abụghị kpara akwa (na-eji ákwà si polypropylene, Spun-bond) Non kpara akwa mere si na-amaghị nwoke pp ihe na-eme ka akpa ọzọ inogide. Okpukpo nke akwa a kpara na-esite na 60gsm ruo 120gsm.
Ahaziri eco-enyi na enyi e biri ebi na-acha ọcha p na-abụghị kpara tote akpa
A multipurpose na-abụghị kpara akpa bụ oké ụzọ n'ihi na ị na ngosi gị ika ma ọ bụ dị ka ihe ezigbo onyinye maka ndị ị hụrụ n'anya.
Mbipụta dị na abụọ. Nwere eco-enyi na enyi, adaba na ndị bara uru mma.
Ngwunye a na-emeghị akwa anaghị akwụ ụgwọ ma na-enye ezigbo mma.
omenala shopping akpa na-abụghị kpara akpa ịzụ ahịa price nkwado na-ebi akwụkwọ
Large reusable emefu nri Tote na-abụghị kpara shopping akpa
Recyclable nri Shozụ ahịa akpa ụlọ ahịa Red Tote Bag Non kpara akpa
China Laminated Foldable Beige Non kpara Shopping Bags na Logo
E biri ebi recyclable ákwà eze-acha anụnụ anụnụ na-abụghị kpara shopping akpa na logo
Eco-enyi na enyi nkwado omenala ọchịchịrị ọbara ọbara na-abụghị kpara tote akpa
Trading show uhie na-abụghị kpara akpa Tote akpa nwere ike ahaziri na gị logo
Nkwado eyi reusable Eco-enyi na enyi Advertising Tote Red Non kpara Shopping Bag